Aspiriinin dhibee kaansarii mar’imaan guddaa ni ittisa – Fana Broadcasting Corporate
Aspiriinin dhibee kaansarii mar’imaan guddaa ni ittisa
Finfinnee, Gurraandhala 5,2011 (FBC)- Aspiriinin dhibee kaansarii mar’iimaan guddaa ni ittisa jedhame.
Dawichi dhibee kaansarii mar’imaan guddaa ittisuu danda’us, fayyadamtoonni dawichaa muraasa ta’uu dubbatameera.
Yeroo baay’ee namoonni miira dhukubbii mar’iimaan guddaa qaban, dhibichi kan dhufu mallattooleen xixiqaan mar’iimaan irratti muul’achuun yoo ta’u, mallattooleen xixiqqaan kun hamma saaxilamuu mar’iimaan guddaa kaanseeriif akka dabalan beekameera.
Taateewwan qorannoon kan addaan baafamu ta’uu kan ibsame yoo ta’u, namoonni rakkinichaaf saaxilamoo ta’an qorichoota biroo kan fudhatan yoo ta’e, aspiriinii hammi isaa gadi aanaa ta’e akka fudhatan jiddugalli Farra Kaansarii Ameeriikaa ni hayyama.
Dawaan aspiriin jedhamu dhibee kaansarii mar’iimaan guddaa %40 ittisuun, mallattoolee xixiqqaa mar’iimaan guddaa irratti mul’ataniis ittisuu akka danda’u ibsameera.
Qoratoonni Yuunvaarsiitii Atilaantik qorannoo bara 2013 hanga 2017tti gaggeessaniin namoota mar’iimaan guddaa irratti mallattooleen xixiqqaan bahanii dawaa aspiriinii akka fudhatan ajajameef namoota 85 keessaa %43 qofitti dawicha seeraan fudhachuun mirkana’eera.
Hamma saaxilamuu namootaa dhibee kanaa hir’isuuf; qorannoo duraa kaansarii mar’iimmaan guddaa gochuu, sochii qaamaa gochuu fi haala nyaata keenyaa sireessuun barbaachisaa akka ta’e qoratoonni ni dubbatu.
Dhibichaan erga qabamnee boodaas qorichoota ogeeyyii yaalaan ajajaman seeraan fudhachuun, fayyaa keenya sireessuu fi umurii keenya dheeressuu akka dandeesisan qorattoonni ni gorsu.